Lalao iPlayer: Andro fiompiana aterineto. Play maimaim-poana
Lalao iPlayer: Andro fiompiana an-tserasera
Hamster ny mpamboly
Lalao Online fikatsahana lalao Funny Games Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Farm Farm Frenzy Simulations ho an'ny ankizivavy Building Miracle Farm Fikarakarana ny biby Rancher Farm Biby iPlayer
iPlayer: Andro fiompiana (Farm Days):
Lalao Fambolena: maka
Mihevitra ny mponina ao an-tanàna indraindray fa mahafinaritra ny miaina ao amin'ny toeram-piompiana - mahafinaritra foana ny toetr'andro, mamiratra ny masoandro, madio ny rivotra, madio ny sakafo. Fa izany dia hitranga raha mpizahatany ao an-tanàna ianao, rehefa tsy mila fiasa manomboka amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehan'ny masoandro, mba hisy sakafo eo ambonin'ny latabatra. Ny fahatakarana kely ny fomba fiasa eto an-tany dia hanampy ny lalao an-tserasera Farm Dina. Nanomboka tamin'ny zava-drehetra izany fa nandao lova ianao. Niditra tao amin'ny zon'ny tompony ianao avy eo, tonga teo amin'ilay toerana ianao mba hanombana ny zon'ilay tany. Saingy inona ny fahadisoam-panantenana avy amin'ny zavatra hitany - rakotra ahitra avo rehetra ny zava-drehetra, ary trano manirery roa - ny tranonao sy ny trano fitehirizanao ary ny lanjan'ny lanja. Toa tsy nanao zavatra ela ny tompony teo aloha, ary tao anatin'ny taona maro dia tonga ny fandravana tanteraka. Eny, tsy maintsy asehoy ny zavatra vonona ianao, ary ny mponina ao an-tanàna koa dia mahay manao fety ary afaka miasa. Ho tonga milalao an-tsaha, dia mila fitaomam-panahy sy faharetana ianao raha te hihaino anao voalohany amin'ny mpanampy hihaona aminao, hitarika ny asanao, ary hanome asa. Masha no anarany - tovovavy marefo mipetraka amin'ny manodidina. Vantany vao niarahaba anao izy, dia nitodika haingana teo amin'ny raharaha lehibe - miasa. Izahay dia mamolavola ny taninay
Ilay tovovavy dia naneho ny fiainana mampatahotra ao an-tranonao ary raha te-honina ao ianao dia mila manamboatra izany. Aza matahotra, moramora ny manao an'izany - mila tsindrio fotsiny ny tranobe ianao, ary indreto misy trano kely fotsy misy tafo mena sy zaridaina kely manodidina. Manaraka ny tsipika dia ny fitoeram-bary - ilay trano lehibe, satria apetrak'izy ireo ny vokatra, ary mitazona ireo fitaovana. Hita fa mila overhaul lehibe koa izy. Ataovy toy izany aminy, ary am-pahavitrihana ny lavaka eny an-tafontrano, voapetaka ny rindrina, hosodidiana vaovao ireo varavarankely tapaka. Rehefa voavaha ny olana momba ny fanamboarana dia manomboka maniry ny vokatra isika. Ny zavatra voalohany tsy maintsy hitomboanao dia ny vary. Hanombohana rano dia asio rano ao anaty lava-drano, ary asio faritra kely misy voan-javatra. Tsy maintsy miandry isika mandra-pahatongan'ny fitsimohan'ny tsimoka, masaka, ary azo atao ny manangona azy ireo. Saingy misy fomba fohy kokoa - handoavam-bola roa, ary hitombo haingana kokoa ny varimbazaha. Mba hamitana ny hetsika tsirairay dia mila manamarika ireo zavatra ireo ianao:
• Manangona rano ao anaty lava-drano izahay
• Tsindrio ny tetika hanondraka rano
• Rehefa masaka ny vokatra, tsindrio indray raha hanangona azy.
Amin'ny ho avy, hanohy ny lalao amin'ny tantsaha mpiompy, manao toy izany koa isika isaky ny mila manao hetsika. Manomboka mahazo vola
Ny zava-tsarin'ny fivoarana amin'ny lalao dia mahaliana, ary ny hiditra ny anaranao ao, ny fanoratana ny Farm Day dia hanampy anao na hisoratra amin'ny pejy sosialy. Rehefa azo ny vokatra, dia mianjera ao amin'ny trano io izay efa namboarinao, izay eo akaikinao, misy tabilao fanamarihana. Raha vantany vao mipoitra ny mari-pahaizana maintso iray, dia misy asa vaovao tonga. Ao amin'ny iPlayer Farm Andro dia afaka atolotra tombony azo omena anao ianao amin'ny famatsiana ny iray amin'ireo vokatra, ary raha manaiky azy ianao dia manomboka ny asa lehibe. Manomboka androany dia tsy maintsy mahatadidy ny sarinao ianao ary manandrana tsy mampidina ny mpanjifa. Hanomboka tsikelikely ny orinasam-bokatra dia hanokatra fotoana mahaliana maro ho anao:
• Famonoana biby sy akoho
• Manondraka zavamaniry isan-karazany
• Manangana orinasa
• Manaova vokatra amin'ny entana
• Amidio amin'ny tsena sy ny fivarotana izany
Hiainga avy amina tanàna iray ianao izay tonga amin'ny tany tsy misy mankamin'ny tantsaha za-draharaha, mivoatra ary manankarena, izay manana ny zava-drehetra.